प्रक्रिया को स्टार्टर र सुरुवातमा समस्या को एक किसिम प्रयोग गरेर एक कार इन्जिन चलान - यो विशेष फोरम मा मोटर चालकहरुलाई द्वारा छलफल लोकप्रिय विषयहरू छ। मुद्दाहरू र मोटर चलिरहेको सम्बन्धित समस्या, यो (विशेष गरी जब कार आवश्यक छ "अहिले") धेरै कष्टप्रद छ। तर इन्जिन शाब्दिक हुँदा पनि अधिक कष्टप्रद ठीक काम, तर केही मिनेट पछि, यो पनि तातो गाह्रो बनाउन। को स्टार्टर गर्म मा उत्तेजित गर्दछ जब अवस्था, हरेक कार मालिक परिचित। का कारक यो व्यवहार र कसरी यी समस्या समाधान गर्न नेतृत्व के हेरौं।
यस्तो अवस्थामा आपत्ति गर्न आउने पहिलो कुरा - यो discharged वा खराब ब्याट्री छ। तर प्रायजसो मा ब्याट्री पूर्ण जस्ताको तस्तै छ, र समस्या अन्यत्र खोजे हुनुपर्छ। समस्या अक्सर आत्म स्टार्टर, वा यसको समावेश को श्रृंखला मा विद्युत समस्या सम्बन्धित।
स्टार्टर: उपकरण र समारोह
हामी राम्रो निदान र मर्मत गर्ने बारे रूपमा breakdowns को कारण, कुरा अघि, थाहा के कार्यहरू गर्ने स्टार्टर र यसलाई कसरी कार्य आवश्यक छ। सबै आधुनिक कार मालिक थाहा र उद्देश्य र स्टार्टर उपकरण बुझ्छु। त्यसैले, एक स्टार्टर यसलाई सुरु देखि इन्जिन ले असम्भव छ बिना यांत्रिक ऊर्जा मा ब्याट्री देखि बिजुली धर्मान्तरित एक उपकरण भनिन्छ। तत्व विशेष यांत्रिक ड्राइभ एउटा बिजुली डीसी मोटर छ।
विद्युत मोटर स्टार्टर रिले बाहेक एक retractor र BENDIX हुन्छन्। रिले दुई coils बनेको छ:
कोर फिर्ता लिन, यो पर्याप्त शक्ति लागू गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि दुई coils नै समारोह प्रदर्शन गर्न सक्छन्।
यो चक्का संग संलग्नता आवश्यक छ। BENDIX गियर र चक्का छैन एकदम एक मोटर सक्षम ती माथिको इन्जिन क्रैन्कशाफ्ट को गति देखि, स्थायी meshed गर्न सकिन्छ। गियर BENDIX निरन्तर उच्च गति मा घुम्नेछन् भने, स्टार्टर तेजी असफल।
डिजाइनमा BENDIX तीन समूह विभाजन गर्न सकिन्छ:
एक रोलर प्रकार - अक्सर हुन्छ भनेर एक प्रणाली छ। यस प्रणालीको सञ्चालनको सिद्धान्त परिक्रमण विपरीत दिशा मा हुँदा एक निर्देशन र निःशुल्क चलिरहेको मा परिक्रमा को समय, मा Jamming गियर यसको होल्डर सापेक्षित आधारित छ।
दोस्रो समूह - एक शाफ्ट। यो प्रणाली शाफ्ट संयन्त्र द्वारा काम गर्दछ। अक्सर, यी BENDIX Delco Remy संयुक्त राज्य अमेरिका देखि उपकरणहरूमा पाउन सकिन्छ। यी स्टार्टर्स एक ठूलो क्षमता यस डिजाइन, जायज छ।
उपकरण तेस्रो समूह - एक ड्राइव, को संलग्नता भएको प्याकेट घर्षण प्लेट द्वारा बाहिर छ जसमा। यो समाधान व्यापक स्टार्टर्स मा प्रयोग गरिन्छ "बश" श्रृंखला 0001410 र अरूलाई ट्रक लागि अभिप्रेरित।
Starters मोटर BENDIX गर्न सापट देखि टोक स्थानान्तरण को विधि मा फरक। यहाँ तपाईं क्लासिक सीधा-मार्फत स्टार्टर, लेख मा प्रस्तुत छ फोटो जो चयन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ BENDIX को कवच सापट सिधै स्थित छ। त्यहाँ पनि तैयार स्टार्टर्स। को BENDIX र मोटर बीच गियर छ भन्ने तथ्यलाई को peculiarity। यी उपकरणहरू नै वजन र आकार त्यो राम्रो ramjet छन्, तिनीहरूले थप टोक विकास गर्न सक्षम छन्। अक्सर तपाईं ग्रह gearboxes संग मोडेल पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यो समग्र आयाम वृद्धि गर्न निर्माताहरु सक्षम बनाउँछ। कम-शक्ति स्टार्टर मा ग्रह गियर प्लास्टिक भागहरु हुन्छन्। यो अलिकति स्रोत कम गर्छ। तर, ग्रह gearboxes संग निर्माण अपेक्षाकृत सस्तो हो।
कसरी स्टार्टर गर्छ?
कार को मालिकले ज्वलन मा प्रमुख उत्तेजित गर्दछ गर्दा वा बटन क्लिक, ब्याट्रि द्वारा संचालित retractor रिले गर्न प्रवाह गर्न थाल्छ। अर्को retracts बंद र विशेष लीवर BENDIX धक्का मार्फत छ जो रिले, को तार धारण। त्यसपछि बाद इन्जिन सापट को क्रैन्कशाफ्ट मा चक्का संग संलग्न छ।
जब BENDIX अन्त पुग्छ, कोर को retractor घुमावदार बन्द गर्नेछ। मोटर को बन्द सम्पर्क, र यो घुमाउन सुरु हुन्छ। ड्राइभ गियर को परिक्रमा मार्फत एक चक्का शक्ति एकाइ स्पिन गर्ने BENDIX, हस्तान्तरण गरिनेछ।
एक स्टार्टर को malfunctions को मुख्य कारण
त्यसैले, ड्राइभर, छोटो पार्किङ पछि पाङ्ग्रा पछि बसे प्रमुख गरिएका, तर स्टार्टर गर्म मा उत्तेजित गर्दछ। अब हामी एक स्टार्टर आवश्यक किन थाहा र कसरी यो काम गर्छ, त्यसपछि हामी malfunctions को कारण कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
पहिलो कुरा ब्याट्री जाँच गर्न छ। अक्सर कारण एक discharged ब्याट्री वा निष्क्रिय मा समावेश। यो अक्सर कार मालिक, कार देखि छोटकरीमा छोडेर कुरा बन्द गर्न भूल हुन्छ। यो रोशनी, नेभिगेसन र मल्टिमिडिया, र अन्य विद्युत उपकरण हुन सक्छ। यस मामला मा ब्याट्री (यो नयाँ छैन, विशेष गरी यदि) चाँडै बाहिर चल्छ। साथै, सँगै ब्याट्री संग यो टर्मिनलहरु को अवस्था जाँच गर्न सिफारिस गरिएको छ।
पूर्व-ज्वलन, ब्रश, ब्रश
अर्को कारण - पूर्व-ज्वलन। निम्नानुसार यो जाँच गरिन्छ: खींच तार को ज्वलन तार, र त्यसपछि एक स्पार्क बिना इन्जिन न्यानो सुरु गर्न प्रयास गर्नुहोस्। को क्रैन्कशाफ्ट सजिलै rotates भने, त्यसपछि यो जरूरी ज्वलन सिस्टम को सञ्चालन ठीक छ। को स्टार्टर गर्म मा उत्तेजित गर्दछ भने, यो धेरै पहना ब्रश वा आस्तीन बन्न सक्छ। भित्र स्टार्टर यांत्रिक भागहरु समावेश - बेयरिंग। ब्रश लागि जाँदा, तिनीहरूले कलेक्टर प्राप्त छैन अत्यधिक पहनने गर्दा गर्न सक्नुहुन्छ। जब बाहिर ताप सन्दर्भमा स्टेटर समयमा असर ब्रश, मोटर कवच लगाउँथे। परिणाम गति मोटर स्टार्टर कम एक सर्किट छ।
यस मामला मा, विशेषज्ञहरु interturn छोटो सर्किट लागि एङ्कर जाँच गर्न एक मल्टीमीटर सुझाव दिन्छौं। को स्टार्टर भित्र के छ? फोटो आन्तरिक उपकरणहरू यस लेखमा उल्लेख। यो साईट कार मालिकहरूको लागि उपयोगी हुनेछ। यसलाई गलत तरिकाले मरम्मत को प्रक्रिया मा स्लिभ चुनिएको सम्भव पनि छ। ताप को समयमा अनुपयुक्त स्लिभ वेज हुन सक्छ।
ज्वलन लक retractor रिले
अक्सर स्टार्टर संग यस्ता समस्या ज्वलन मा malfunctions कारण हुन सक्छ। यस मामला मा, महल मा सम्पर्क समूह जाँच गर्नुहोस्। साथै, कार मालिक कहिलेकाहीं महल र यसको श्रृंखला मा घाटा कम गर्न थप एक स्विच थप्नुहोस्। यदि गर्म स्टार्टर VAZ मोड छैन, यो retractor रिले शक गर्न सम्भव छ। आधुनिक कार को विद्युतीय भाग तापमान गर्न उत्तरदायी (र उच्च मा अक्सर) हुन सक्छ। तपाईं बस यो जाँच गर्न सक्छन्: जब तपाईं बारी लक मा प्रमुख श्रव्य क्लिक हुने छैन। यसलाई चाँडै स्थिति समाधान - बस रिले प्रतिस्थापन गर्नुहोस्। साथै, तार र टर्मिनलहरु retractor रिले को निष्ठा ठेगाना लगान गर्न amiss छैन। पनि रिले र स्टार्टर जडान कि तार जाँच गर्नुहोस्।
अन्तमा, समस्या इन्जिन नै सम्बन्धित हुन सक्छ। क्रैन्कशाफ्ट रोपण धेरै कडा हुन सक्छ। त्यसपछि, चुच्चो पिस्टन देखि जाम गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक धेरै अप्रिय कारण छ। तर आफ्ना आफ्ना आवश्यकता पूरा वाहन निदान पहिचान गर्न।
यो अर्को असामान्य कारण छ। फेरि स्टार्टर दोष। अपरेसनमा, विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप तत्व जो क्रैन्कशाफ्ट स्थिति सेन्सर कार्य उत्पन्न। फलस्वरूप, यो इन्जिन ECU मा गलत अध्ययनहरू दिन्छ। यस कारण, कम्प्युटर राम्ररी तत्संबंधी इन्धन र मिश्रण को प्रवाह ठीक गर्नु सक्दैन। फलस्वरूप, मोटर सुरु गर्न चाहनुहुन्छ छैन।
को स्टार्टर सबै पालैपालो मा पनि बिस्तारै वा rotates, तर
स्टार्टर लागि दुई तार जडान। ब्याट्रि बाट - ती एक ज्वलन र अन्य बाट चल्छ। कार को संचालन मा, यी सम्पर्क ऑक्सीकरण गर्न सकिन्छ। तापमान rises गर्दा, सम्पर्क र टर्मिनलहरु फरक। परिणामस्वरूप मिश्रित भाँचिएको छ र गायब। यो स्टार्टर इन्जिन हट मोड गर्दैन किन अर्को लोकप्रिय कारण छ।
यो समस्या समाधान गर्न, यो डेटा जडान सफा गर्न र आक्साइड देखि तार र सम्पर्क सफा गर्न पर्याप्त छ। त्यसैले, ब्याट्री र अन्य उपकरणहरू संग टर्मिनलहरु हटाइयो। हालको प्रसारण uchuvstvuyut जो सबै सतहहरु स्यान्डपेपर संग sanded। बोल्ट, नट र अन्य सम्पर्क पनि थप एक रक्सी संग उपचार। यी प्रक्रिया पछि, विशेषज्ञहरु टर्मिनल चिल्लो मा राख्न सुझाव दिन्छौं। अक्सर, को स्टार्टर ठीक किनभने गरिब सम्पर्क को तातो मा उत्तेजित गर्दछ। तपाईं कार को आधा मार्फत जान सक्नुहुन्छ, तर प्रायजसो यो सम्पर्क सफा गर्न पर्याप्त छ।
निदान र स्टार्टर को मरम्मत
यो उपकरण एक विद्युत मोटर छ। यसको वर्तमान खपत धेरै ठूलो छ, तर यो एक केहि सेकेन्ड को लागि सेवा छ, त्यसैले ब्याट्री डिस्चार्ज गर्न समय छैन। गर्म स्टार्टर मोटर काम गर्न असफल भएमा, र नै समय पूर्ण वाहन निदान सबै घटक सही हो भनेर देखाए मा, यो फुकाल्नु र स्टार्टर निरीक्षण गर्न आवश्यकता सुझाव। उपकरण सामान्यतया शक्ति एकाइ को तल स्थित छ। आवश्यकता स्ट्रबेरी र घन्टी spanners, र एक लामो सकेट रेन्च खोल्ने गर्न। जब एक नोड छ हटाइयो, यो आफैँ खोल्ने गर्न आवश्यक छ। ध्यान सम्पर्क र मुख्य संग्रह को सामान्य अवस्था निरीक्षण गर्न आवश्यकता निराकरण पछि। यो पनि विशेष ध्यान BENDIX भुक्तान भनेर सिफारिस गरिएको छ। को स्टार्टर उत्तेजित गर्दछ जब, तर बुझ्न गर्दैन कहिलेकाहीं अवस्था, यसलाई संग सम्बन्धित छ। BENDIX मा स्लट को स्थिति जाँच गर्नुहोस्। विशेष ध्यान लङ्गर भुक्तान छ - यहाँ कलेक्टर बल्छ। तिनीहरूले नराम्ररी ब्रश थकित हुन सक्छ। यो कलेक्टर scorching को निशान छ गर्न सक्नुहुन्छ, प्लेट नीलो हुनुपर्छ। को windings र आफ्नो इन्सुलेशन को अवस्था जाँच गर्नुहोस्।
कार को निदान
धेरै मोड गर्दैन स्टार्टर, सुरु गर्छ जहाँ एक स्थितिमा गिरावट। यस मामला मा के गर्न? कार निदान पकड। सबै को पहिलो स्पार्क जाँच गर्नुहोस्। तिनीहरूले इन्धन मिश्रण दहन Chambers मा ignited छ जो मार्फत एक स्पार्क, उत्पन्न। मोमबत्ती जम्मा छैन, राम्रो अवस्थामा हुनुपर्छ। Oddly पर्याप्त, तर तिनीहरूले कसरी स्वतः बोट असर गर्न सक्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण विवरण - एक इन्धन फिल्टर। तिनीहरूले बाहिर फिल्टर मलबे, जंग, माटो र धूलो - यो हाम्रो रूसी इन्धन सबै त्यहाँ। र पेट्रोल मा माटो साबित ग्याँस स्टेशन मा लाउने पनि सुरक्षा छैन। साँच्चै, जम्मा ट्यांक मा हुन सक्छ। त्यसैले एक पटक हरेक5वर्ष हटाउन संग इन्धन ट्यांक पूर्ण निस्तब्धता बनाउन आवश्यक छ। माटो शक्ति आपूर्ति प्रणाली भित्र हुन्छ भने, यो किन स्टार्टर उत्तेजित गर्दछ, तर बुझ्न गर्दैन कारण हुन सक्छ। को निदान मा खाताबाट फिल्टर बन्द लेख्न कुनै आवश्यकता (र वास्तवमा सामान्यतया त्यसैले तिनीहरू बारेमा भूल किनभने गर्छन)। अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व - को भल्ब। कि मिसिन सधैं र कारखाना सबै अवस्थामा छ, यो वाल्व सफा राख्न सिफारिस गरिएको छ।
यो क्षति हुन सक्छ कि धेरै कारणहरू छन्। तर निराश छैन। यी सबै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। तिनीहरूलाई पनि साईट चालक सामना। को स्टार्टर चिसो र तातो मा उत्तेजित गर्दछ भने - कुनै, यो आफ्नो कार थाहा र उनको निदान पकड प्राप्त गर्न अवसर छ।
अनन्त प्रश्न: के राम्रो छ - "संयन्त्र" वा "स्वचालित"?
मित्सुबिशी एल 200 - सुरुचिपूर्ण जनावर
कसरी कार को पाङ्ग्राहरू को हब हो?
"ProPlan" (बिरालो खाना): समीक्षा पशु चिकित्सकहरु। को कडी को समीक्षा "ProPlan" बिरालो सुक्खा र भिजेको
छोटकरीमा: सुधार Stolypin, यसको सार र परिणाम
2014 मा वृद्धि गर्नेछ डलर? 2014 मा डलर को पूर्वानुमान